၆သန်းမြောက် ထရိတ်ဒါကို FBSမှ စောင့်မျှော်နေပါသည်!
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘရုတ်ကာက ဘယ်သူများပါလဲ?! FBSကိုတော့ ထရိတ်ဒါ ၆သန်းက ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်! 😊
ရာပေါင်းများစွာသော ဘရုတ်ကာတွေထဲကမှ ကျွန်တော်တို့ကို ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက် ကျေးဇးတင်ပါတယ် ချစ်မ်ိတ်ဆွေတို့ရေ. ဒီနှစ်က ကုမ္ပဏီအတွက် အလွန်တရာမှ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာနှစ်တစ်နှစ်ပါ - ရုံးခွဲအသစ်များဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီဒ ထရိတ်ဒါပါတီပွဲများစွာလဲကျင်းပနိုင်ခဲ့ကာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးငွေကြေးပြပွဲကြီးမှာပါ ပါဝင်ပြသနိုင်ခဲ့ပါသည်.
FBSအတွက် ပိုပြီး အရေးအပါဆုံးကိစ္စကတော့ ယခုနှစ်အတွင်း ဖောက်သည်ပေါင်း ၃သန်းအထိ ထပ်မံတိုးပွားလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါသည်. ဖောက်သည်အရေအတွက်မှာ ၆မိနစ်ကို တစ်ယောက်နှုန်းနှင့်တိုးတက်လာနေတာဖြစ်ပြီး မကြာမီမှာတော့ ဘယ်ကံထူးရှင်က ဆုလက်ဆောင်ရရှိသွားမလဲဆိုတာကို သိရှိရတော့မှာ ဖြစ်ပါသည်. စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါ!
ယခင်ဆုရရှိခဲ့သူများအား ဆုချီးမြှင့်ပေးခဲ့သည့်အကြောင်းများကို ကြည့်ရှုလိုက်ပါ